Aluminium Window Screen - China Hebei Samsung Metal wocingo
Aluminium window screen yenziwe al-mg wire ingxubevange ebonaka- ngokufaka. wire aluminium olunemingxuma iwela baziindidi ezimbini: aluminium wemagniziyam wire ingxubevange kwakunye nocingo aluminiyam olunyulu umnatha, ephothiweyo ngokwahlukileyo ngocingo aluminium ingxubevange kunye ucingo aluminium ecocekileyo. Umbala al ingcongconi screen: obuqaqambileyo Silver okanye namalahle. Aluminium ingxubevange Insect Screening ibiza ngaphezu Fibreglass wocingo kodwa ixesha elide kakhulu ngakumbi. Aluminium ukuhlolwa onzima kunye ixesha elide, ngokokuqhelekileyo ngo-18 x 16 enemingxuma, 0,011 ubukhulu ukuhlolwa, ofanelekileyo ...
Aluminium window screen yenziwe al-mg wire ingxubevange ebonaka- ngokufaka.
Wire aluminium olunemingxuma iwela baziindidi ezimbini: aluminium wemagniziyam wire ingxubevange wocingo kunye neengcingo aluminiyam olunyulu umnatha , ephothiweyo ngokwahlukileyo ngocingo aluminium ingxubevange kunye ucingo aluminium ecocekileyo.
Al ingcongconi screen Umbala: obuqaqambileyo Silver okanye namalahle.
Aluminium ingxubevange Insect Screening ibiza ngaphezu Fibreglass nylon kodwa ixesha elide kakhulu ngakumbi.
Aluminium ukuhlolwa onzima kunye ixesha elide, ngokokuqhelekileyo ngo-18 x 16 enemingxuma, 0,011 ubukhulu ukuhlolwa, ifanele ukuba inkoliso umnyango kunye window izicelo. Aluminium window screen akayi nerusi okanye ukufuma. Olunikwe imiqulu okanye amaqhekeza cut.
Mesh kwezinambuzane iye ubunzima ukukhanya, nokumelana elungileyo kunye nokumelana irusi
Yesicelo: Njengoko uvavanyo isinambuzane okanye umthunzi nxamnye iimpukane ingcongconi, ukhuseleko oomatshini, umoya eziphathekayo kunye nokufumana imiyalezo.
Kwakhona nikeza iinkqubo umnatha isinambuzane, leyo eyenzelwe ngokukodwa iifestile neengcango, egqibeleleyo, ukuze zombini ukusetyenziswa ekhaya kunye noshishino.
Kulula ukuba ukufaka mesh izinambuzane?
mesh kwezinambuzane Kulula kakhulu ukuba ukufaka. Zonke iintlobo zethu kunqunyulwa kunye izikere eyomeleleyo, yaye emva koko ngesteyipla nje okanye ethe endaweni.
ezinambuzane Koda kube nini enemingxuma kuhlala?
Ixesha lokuphila lwabemi mesh kwezinambuzane iya kuxhomekeka izinto ezisetyenzisiweyo, yaye ngokufuthi kangakanani na kuxhomekeke ukunxiba kunye iinyembezi. Umnatha kakhulu nzima-enxibe siya sithengise kukuba eyenziwe ngenkcenkce, yaye oku ifumaneka mhlawumbi insimbi okanye aluminium.
Yethu fiberglass kunye enemingxuma zentsimbi PVC camera nezinye atshiphu, kodwa ekugqibeleni kwabo babuthathaka yaye kufuneka isetyenziswe kuphela ngaphakathi. Noko ke, yethu pet enemingxuma Lomelele yaye yenziwa ipholiyesta ezininzi ezinombindi wesiseko nenayiloni.
Yintoni umahluko phakathi kwandiswa kwaye ephothiweyo izinambuzane umnatha ?
Impela nje, umnatha eyandisiweyo inamandla kwaye ugcina ukwakheka kwalo xa uyagoba, kanti umnatha ephothiweyo kulula kakhulu ukukrola Zityede ngaphandle imilo.
Ndisenako ukuthenga phi izinambuzane umnatha?
Ukuba ufuna naluphi na uncedo ngokuthenga kwakho nceda musa ukuthandabuza usifowunele ngomhla 0086-311-69013206 okanye uqhagamshelane nathi nge email okanye kwi Internet.
Previous: Chain Link Kucingo olubiyele
Okulandelayo: Isefu welding Gabion enemingxuma
Staninless Steel wocingo